छोटकरीमा : यस हप्ता - मंसिर ०७ गतेदेखि मंसिर १४ गतेसम्म (अन्तर्राष्ट्रिय)
यस हप्ता बोकोहरामद्वारा ४३ जना किसानको घाँटी रेटेर हत्या, बाइडेन प्रशासनको नालीबेली, कोरोना खोपको प्रभावकारिता बढेको राष्ट्रहरूको दाबी, शताब्दीकै महान् खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको निधन र विचलित फुटबल जगत लगायतका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएका छन् ।
बेलायती औषधि निर्माता अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरिरहेको कोभिड– १९ को खोपले औसतमा ७० प्रतिशत मात्र सफल भएको जनाएको छ । सुरुमा निकै उत्साहजनक नतिजा ल्याएको भन्दै प्रचारप्रसार गरिएको यस खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।
नाजेरियाको एक मस्जिदमा बन्दुकधारीहरूले आक्रमण गरी पाँचजनाको हत्या गरेका छन् भने १८ जनालाई अपहरण गरी लगेका छन् । नाइजेरियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक मस्जिदमा केही बन्दुकधारीले आक्रमण गरेको प्रहरीले आइतबार पुष्टि गरेको हो ।
नाइजेरियाको मस्जिदमा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट पाँचको हत्या, १८ जना अपहरित
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले अमेरिकी विदेशमन्त्रीमा आफ्ना सल्लाहकार सहयोगी एन्टोनी ब्लिन्केनलाई मनोनयन गर्ने सम्भावना रहेको छ । बाइडेननिकट स्रोतले ५८ वर्षीय ब्लिन्केनलाई विदेशमन्त्रीमा मनोनयन गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
रियल सोसिडाडले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा साँघुरो जित निकालेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा शीर्ष स्थानको रियल सोसिडाडले साँघुरो जित निकालेको हो ।
सोसिडाडले काडिजलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
सोसिडाडको साँघुरो जित
स्यान्टियागोमा महिलावादीहरूले महिला अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । स्यान्टियागोको एक प्लाजामा बुधबार ठूलो संख्याका महिला जम्मा भएर महिला हिंसाविरुद्ध नारा लगाएका हुन् ।
सुरक्षाको माग गर्दै स्यान्टियागोमा महिलावादीहरूको प्रदर्शन
टेस्ला कम्पनीका मालिक एलन मस्कले २०२० मा मात्र आफ्नो सम्पत्तिमा १००.३ अर्ब डलर थपेपछि उनले विश्‍वको सर्वाधिक धनी व्यक्तिहरुमा, माइक्रोसफ्टका बिल गेट्सलाई हराएका छन् ।
४९ वर्षीय मस्कको सम्पत्ति, टेस्लाको सेयरमा भएको ठूलो वृद्धिपश्चात् ७.२. अर्ब डलरबाट बढेर १२७.९ अर्ब डलर पुगेको हो । सोमबारको दिनमा मात्र मस्कको सम्पत्तिमा ७.२ अर्ब थपिएको थियो ।
बिल गेट्सलाई हराउँदै टेस्लाका मालिक एलन मस्क बने विश्‍वका दोस्रो धनी व्यक्ति !
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले गरेको समन्वय इमानदार भएको बताएका छन् । ‘यसका लागि ह्वाइटहाउस अनिच्छुक छैन र मलाई लाग्छ यो त्यस्तो हुने छैन,’ एनबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा बाइडेनले भने ।
एउटा परेवाको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? तपाईं कति रुपैयाँ तिरेर किन्नुहुन्छ ? हजार..., १० हजार... वा सोभन्दा कम ? तर बेल्जियमा भएको एउटा परेवा १९ लाख डलर (भारु १४ करोड) रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर किनिएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा पराजित भएपछि पहिलोपटक ह्‌वाइट हाउसबाट बाहिरिन तयार रहेको बताएका छन् । इलेक्टोरल कलेजले डेमोक्रेटका उमेदवार जो बाइडेनलाई औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति भएको पक्का गरे आफू पद छाड्न तयार भएको उनले बताएका हुन् । उनले अझैसम्म पनि स्पष्टसँग आफ्नो हार स्वीकारिसकेका छैनन् ।
ह्‌वाइट हाउसबाट बाहिरिन तयार रहेको ट्रम्पको संकेत !
ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले कोरोना खोप नलगाउने बताएका छन् । बिहीबार साँझ दिएको वक्तव्यमा उनले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नलगाउने बताएका हुन् । उनले पटक पटक कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बेलायतको सरकारले कोरोनो भाइरसको महामारी अन्त्यका लागि बनाएका नियमहरुको पालना गर्न सबै नागरिकसँग आग्रह गरेका छन् ।
उनले बेलायतमा दोस्रो पटक आएको कोरोना भाइरसको वेभबाट बच्नका लागि विभिन्न नियमहरु बनाएको स्मरण गराए ।
राष्ट्रपति भलाद्मीर पुटिनले महिनौँ अगाडि नै, रुसमा निर्मित ‘स्पुतनीक–भी’ लाई विश्वकै पहिलो स्वीकृत कोरोनाविरुद्धको खोप भनि घोषणा गरेका थिए भने आफ्नी छोरीले समेत लगाइसकेको बताएका हुन् । तर उनी आफैँले चाहिँ यो खोप प्रयोग नगर्ने बताइएको छ । ६८ वर्षीय पुटिन पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमपूर्ण समुहमा पर्दछन् र रुसमा गत अक्टोबर २८ देखि नै ६० वर्ष भन्दा माथिको उमेरका स्वयमसेवकलाई खोपको ट्रायलमा संलग्न गराइएको थियो ।
प्रभावकारी र सुरक्षित दाबी गरिएको खोप छोरीलाई दिइयो तर पुटिनले लगाएका छैनन् !
। दक्षिण कोरियामा बिहिबार एकैदिन ५८३ नयाँ कोरोना संक्रमितहरु फेला परेका छन् जुन मार्च पछिकै सबैभन्दा उच्च दर भएको बताइएको छ । सामाजिक दुरी लगायत विभिन्न कडाइ अपनाइरहेको भएपनि दक्षिण कोरिया यतिबेला कोरोनाको तेस्रो लहरबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ ।
कोरोनाको तेस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको दक्षिण कोरियामा फेरि उच्च संक्रमण
सुडानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेता सादिक अल महदीको बिहीबार मृत्यु भएको छ । ८४ वर्षीय महदीको कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण मृत्यु भएको उनको दलले पुष्टि गरेको छ ।
अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त वार्डाकमा बन्दुकधारी एक समूहले सडकमा गुडिरहेका गाडी नियन्त्रणमा लिई २८ यात्रुको अपहरण गरेको छ ।
बन्दुकधारी समूहले बुधबार काबुलका लागि छुटेका गाडीलाई जालरिज जिल्लाबाट नियन्त्रणमा लिई यात्रुलाई अपहरण गरेको प्रान्तीय प्रहरी प्रवक्ता हाजी मोहम्मद अफियानीले बिहीबार पुष्टि गरेका हुन् ।
अन्तरिक्षको दृश्य अवस्य पनि व्याख्या गर्नै नसकिने अलौकिक किसिमको हुन्छ । अहिले ‘स्पेस–एक्सको क्रु ड्रागन क्याप्सुल’ मा सवार चार मध्येका एक अन्तरिक्षयात्री भिक्टर ग्लोभरले ट्विटरमा यसै सम्बन्धी एउटा भिडियो पोस्ट गरेका छन् । आफ्नो पहिलो अन्तरिक्ष भ्रमणमा क्याप्सुल बाहिर पृथ्वीको दृश्य कस्तो देखिन्छ भन्ने बताउँदै उनले तस्बिर र भिडियो राखेका हुन् । तीस सेकेन्डको भिडियोलाई ट्वीटरमा २१ लाख भन्दा धेरैपटक हेरिएको छ ।
नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी माइदुगुरी सहरमा शनिबार विद्रोही समूह बोकोहरामले ४३ जना किसानको हत्या गरेका छन् । धान खेतमा काम गरिरहेका किसानमाथि उनीहरूले आक्रमण गरी हत्या गरेका हुन् । घटनामा ६ जना घाइते भएका छन् ।
बोकोहरामद्वारा ४३ जना किसानको घाँटी रेटेर हत्या
सोमालियाको राजधानी सहर मोगादिसुको विमानस्थलमा आत्मघाती हमला भएको छ । सो हमलामा परेर कम्तीमा पनि ६ जनाको ज्यान गएको छ । आत्मघाती हमलाकारीले गरेको हमलामा परी ती नागरिकको ज्यान गएको हो । आक्रमण विमानस्थलनजिकैको एक लोकप्रिय आइसक्रिम पसलनजिकै भएको थियो ।
मोगादिसु विमानस्थलमा आक्रमण, ६ जनाको मृत्यु